Shina namboarina manokana pirinty fanomezana boaty fanomezana vita amin'ny baoritra Miaraka amin'ny mpanamboatra ribbon sy mpamatsy | Huaguang
Logo namboarina vita pirinty boaty fanomezana ambongadiny miaraka amin'ny kofehy
Taratasy fanomezana fanomezana taratasy
Size: 18 * 16 * 13cm
Ny fanaovana pirinty, dia vokatra vita pirinty isan-karazany, saika feno fitafiana, sakafo, trano, fivezivezena eny an-tsaha, ary tena akaiky ny fiainan'ny olona. Inona ny refin'ny andiana ampahany mivantana? Tsy ny hijerena raha mifanaraka amin'ny fepetra takiana ny lokon'ny fanontam-pirinty, fa koa hahitana raha milamina ity andiana ranomainty mivantana ity. Androany, mifototra amin'ity boaty fanomezana ity, te-hizara aminareo antony marobe izay mitaona ny fahamarinan'ny loko ranomainty aho:
Ny fijerin'ny maso ny lokon'ny ranomainty dia iray amin'ireo singa lehibe handrefesana ny kalitaon'ny zavatra vita pirinty. Loko ranomainty fanamiana, loko marina sy mamiratra ary loko tsy miovaova no takiana fototra amin'ny kalitaon'ny zavatra vita pirinty. Ny fahatakarana marina ny kalitaon'ny loko fanontana fanontana dia manan-danja lehibe amin'ny fanaraha-maso marina ny loko fanontana fanontana sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanontana ny vokatra fanontana miloko.
Ny fitazonana ny mari-pana sy ny hamandoana tsy miova dia tena zava-dehibe mba hiantohana ny fiorenan'ny ranomainty. Fanontana mandritra ny fahavaratra, avo noho ny maripana manodidina, noho izany mora kokoa ny famindrana pirinty fanontana fanontam-pirinty, ary miaraka amin'ny fitomboan'ny fotoana fanontana, fanatsarana ranomainty fanontam-pirinty, eo ambanin'ny toetran'ny ranomainty mitovy, ny kalitaon'ny fanontana hihalalina ny ranomainty, ka amin'ny fizotran'ny fanontana hahitana ny famantarana ny hakitroky, ampitahaina matetika amin'ny santionany vita sonia, raha ilaina dia azo ahena tsara ny haben'ny ranomainty, hanonta sy hanasonia ny lokon'ny santionany.
Amin'ny ririnina, satria ambany ny mari-pana manodidina dia ambany ny mari-pana amin'ny faritra rehetra amin'ny milina rehefa manomboka maraina ny masinina. Ireo mpandraharaha fanontana dia tsy maintsy manao ireto hevitra roa manaraka ireto alohan'ny hanombohana ny fanontana.
Voalohany, hatsarao ny hafanana sy ny hamandoan'ny atrikasa hahatonga azy hahatratra ny fenitra (20 ~ 24 ℃ ny maripana, 60% ~ 70% ny hamandoana).
Faharoa, manisy ranomainty na ampiana additives na ranomainty ao anaty ranomainty, hampitomboana ny fivezivezen'ny ranomainty, ary avy eo boot.
Ho fiarovana ny tontolo iainana, ity boaty fanomezana ity dia mitazona ny lokon'ireo akora, ka misy fiantraikany kely na tsy azo tsinontsinoavina mihitsy aza ny mari-pana.
Fifantohana vahaolana amin'ny loharano
Amin'izao fotoana izao dia maro ny mpanonta printy no naka rafitry ny fanabeazana mandeha ho azy, fa ho an'ny kinova ampiarahina manaparitaka ny ranon-gazety ny mpanonta printy dia mitaky ny fandefasana mpiasa ny kinova fanabeazana tsara alohan'ny boot, izany dia satria ny fizotran'ny fanontana manampy rano sy alikaola ary fitoeran-drano eo afovoany ny lemaka fanabeazana sasany dia tsy mitovy amin'ny maripana sy ny fifantohana, mora ny manao pirinty amin'ny maloto, fa raha te hanala ilay filana maloto mitsinkafona ianao mba hampitombo ny habetsahan'ny rano dia hitombo ny rano inky ary ho maivana kokoa.
Ho fanampin'izany, ny fifantohana vahaolana amin'ny loharano dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra fanontana, izay azo refesina amin'ny alàlan'ny taratasy fanandramana pH na metatra fifantohana. Raha lehibe loatra ny fifantohana, dia tsy mahafeno ny fepetra takiana ihany koa ny ranomainty, ary havoaka emulsifaly haingana ny ranomainty; Ary raha kely loatra ny fifantohana, dia hesorina ny rano ampidirina amin'ireo faritra velona maloto mitsingevana, ary raha vao haingana ny fanontana, ny maloto mitsingevana dia hiseho mora foana eo am-bavan'ny vava, ho lasa mivaingana ny fitomboan'ny ranomainty, mamorona tsingerina masiaka, tsy azo fehezina ny fametrahana ny fitombanan'ny loko ranomainty.
Fehezo ny habetsaky ny ranomainty
Ny preinking alohan'ny fanontana dia tena zava-dehibe. Aorian'ny fanitsiana ny loko ranomainty, ny santionany fanontana mahazatra, fantatra ihany koa amin'ny santionany amin'ny sonia, dia tokony hatao pirinty aloha, ary avy eo ahantona amin'ny latabatra santionany.
Izany dia mitaky antsika hanao ireto zavatra roa manaraka ireto alohan'ny hanaovana pirinty:
Voalohany, alohan'ny ranomainty hampihenana ny habetsaky ny rano, satria samy hafa ny hakitroky ny lamina, dia ho hafa ny filàna rano.
Faharoa, ny hakitroky ny tsipika famantarana dia tokony ho ao anatin'ny elanelam-potoana mahazatra (ho an'ny fanontana miloko efatra, Y dia 0.85 ~ 1.10, M dia 1.25 ~ 1.50, C dia 1.30 ~ 1.55, K dia 1.40 ~ 1.70).
Ny antony ahazoana antoka ireo teboka roa etsy ambony dia ny hoe raha ny haben'ny ranomainty amin'ny ampahany velona farany dia tena lehibe, ary ny ampahany miaina ankehitriny dia kely dia kely, ary ny rano dia tsy ahena alohan'ny hametrahana ny ranomainty, dia ny lokony ny sonia dia tsy ny loko ranomainty mahazatra mihitsy, ary tsy maintsy miova izy io mandritra ny fanontana. Ary noho izany ny habetsaky ny ranomainty ao amin'ny layout dia tsy handeha, hiakatra tsimoramora amin'ny horonan-taratasy ary hohosorana tsikelikely, ao anaty rano rehefa aorian'ny sarotra ny famongorana ny vovoka mitsingevana, ary ny fanontana amin'ny habetsaky ny famafazana vovoka dia ho miraikitra. Ireo mpandraharaha amin'ny alàlan'ny fihodinan'ny roller ink dia mitranga rehefa ny feon'ny "yi yi", na ny inking roller sy mangirana dia afaka mitsara ny toe-javatra.
Ka ny kapitenin'ny fanontam-pirinty alohan'ny famantarana santionany dia tsy maintsy mamorona fahazarana tsara amin'ny fampihenana ny rano, voamarina amin'ny fizotran'ilay kinova taratasy sy vava ranomainty diao misy ny fandokoana, mandra-pahatonga ny rano hampihena tsikelikely maloto mitsinkafona, avy eo ny famantarana ny ny hakitroka mifanaraka amin'ny fenitra, ny ranomainty dia mifanaraka amin'ny tena dikany, "miaraka amin'ny fantsom-pirinty vita pirinty kely indrindra ary ny pirinty farany ambany amin'ny pirinty", ity fiainana ity dia ho tena mora ny manao fitoniana ranomainty, mora fehezina.
Toy izany koa, ity boaty fanomezana ity dia tsy misy pirinty, fa afaka manamboatra boaty fanomezana isan-karazany isika arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa, karazana boaty sy loko manankarena, fanontana hentitra mijery ny loko ranomainty, no famokarana farany ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ny fepetra ilaina amin'ny boaty fanomezana.
Ity teboka ity dia mamakivaky ny fiorenan'ny ranomainty mandritra ny manontolo, satria ao amin'ny taratasy feida azo antoka ihany eo ambanin'ny toeran'ny fitoniana, ny loko dia afaka mijanona milamina. Raha toa ka tsy mitombina ny famahanana sy ny fanitsiana tsy mety, ny fiara foana sy mankaleo, ary samy miteraka ranomainty, dia handany taratasy be koa, raha misy taratasy offset lehibe (taratasy ankapobeny ambanin'ny 100 g / m2), mora miseho ny totohondry sy ny taratasy mifehy fa tsy miandry trangan-javatra iray, tsy maintsy mieritreritra fomba iray hampiakarana ny hamandoana amin'ny rivotra izy, apetraka eo ambonin'ny feida taratasy feida, esory ny tsorakazo vy amin'ny elektrika mba hialana amin'ny herinaratra tsy miova taratasy.
Miovaova ny kalitaon'ny ampahany velona, ​​ary ny mpanonta dia mety manana ink telo na mihoatra amin'ny masinina fanontam-pirinty (ny ampahany mivantana tsy dia mitaky firy dia inks mora kokoa, fa ny lafo kosa no ampidirina). Kapiteny amin'ny fampiasan'izy ireo ny mampiavaka ny ranomainty dia manana fahatakarana sy fifehezana amin'ny antsipiriany.
Toy ny ranomainty maina haingana amin'ny raharahan'ny mpanjifa toy ny ora fihenam-bidy na ny elanelam-potoana lava, maina haingana, ny ranomainty fanontam-pirinty dia handefa hazavana indray, ary amin'ny vanim-potoana samihafa, ny mari-pana samihafa, ny ranomainty dia hampiseho viscosity samihafa, ka mila ny kapiteny amin'ny fampisehoana samy hafa ny ranomainty, ny dobozy na ny menaka maina adjuvant, na amin'ny alàlan'ny fifehezana ny mari-pana sy ny hamandoana hifehezana ny viscosity an'ny ranomainty.
Mpanamboatra maro no mamokatra inks, fa inks marika ihany no ividianantsika. Boaty fanomezana maro no mampiasa loko pantone amin'ny endriny. Ny loko sasany dia saro-pady tokoa ary hiteraka fahasamihafana amin'ny loko mifanaraka amin'ny fiovan'ny tontolo iainana.
Ny kalitaon'ny taratasy
Ny kalitaon'ny taratasy dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fitombanan'ny ranomainty fanontana. Raha tojo kalitao ratsy ianao, mora ny mandatsaka ny taratasy, tsy maninona ny mifehy, tsy afaka mitazona ny fiorenan'ny ranomainty. Raha toa ka tsy azo soloina ny taratasy dia azo atao ireto manaraka ireto.
1) Sasao amin'ny lamba mando ny sisin'ny taratasy mba hanesorana ny sisin'ny volon'ondry vokatry ny antsy maranitra.
2) mba hanampiana fatra ampiarahina ao anaty ranomainty dia hesorina, mba hihena ny viscosity, ho tsara kokoa ny ranomainty amin'ny volon'ondry lamba firakotra.
3) Rehefa betsaka ny isan'ny fizarana mivantana dia dinihina ny filaharana loko mivadika (tsy misy fiatraikany amin'ny loko farany). Ny ranomainty kely dia apetraka eo aloha ary ny ranomainty lehibe dia apetraka amin'ny vondrona loko aoriana. Amin'izany fomba izany, rehefa vita pirinty amin'ny ranomainty kely ny vondrona voalohany na faharoa ary apetraka eo amin'ny takelaka jiro dia hihatsara tanteraka ny fisian'ny fihenan'ny volo eo ambonin'ny taratasy.
4) Ahena ny tsindry fanontana, volavola tsara ny ora fanadiovana ny lamba firakotra, isaky ny lamba firakotra fanadiovana, asio taratasy bebe kokoa (tsy misy lafiny pirinty miatrika) ho an'ny fanontana fanandramana, izay handray anjara biriky amin'ny fizotran'ny fanontam-pirinty maivana kokoa, noho izany mihena ny tahan'ny fandavana.
Toy izany koa, ny tabilao taratasy sy ny taratasy fampiasa an'ity boaty fanomezana ity dia novidian'ny mpanamboatra izay niara-niasa taminay nandritra ny taona maro. Ny kalitaon'ny taratasy dia tsy hita ivelany, indrindra ny tabilao volondavenona, toa tsara ety ivelany, fa ny atiny kosa dia tena mahantra. Ka ny akora fotsiny no vidianay amin'ireo mpamokatra atokisantsika. Rehefa dinihina tokoa, miaraka amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana dia mihamafy ny fahatsiarovan'ny olona ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny boaty fanomezana tsy misy faran'izay tsara ihany no mendrika alefa amin'ny namana sy havanao.
Tazomy ny loko tany am-boalohany ny boaty fanomezana, ho sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana.
Zavatra tsy misy sakana.
Tsy misy fizarazarana ao anaty boaty fanomezana, mba hahafahanao mametraka ireo fanomezana na aiza na aiza tianao.
Teo aloha: Fametahana tavoahangy tsy misy rano, sarimihetsika maivana na pirinty vita amin'ny boaty misy horonana
Manaraka: Kitapo taratasy fikarakarana hoditra dia ampidirina amin'ny boaty karazana boky PVC
Kaody vita amin'ny kodiarana tsy azo averina mipoitra Rose Flower Bo ...
fanontana matihanina fanontana fanomezana boaty mena boaty wi ...
satroka miendrika toradroa Krismasy hevitra kanto ...
Vokatra vaovao mahafinaritra mpivarotra matihanina ...
Fanontam-pirinty matihanina tsara gloss poakaty fanomezana pac ...